44 “Zvino teerera, haiwa iwe Jakobho mushumiri wangu,+ newe, haiwa iwe Israeri, wandakasarudza.+ 2 Zvanzi naJehovha, Muiti+ wako noMuumbi+ wako, iye akaramba achikubatsira kubvira uchiri mudumbu,+ ‘Usatya,+ haiwa iwe mushumiri wangu Jakobho, newe Jeshuruni,+ wandakasarudza. 3 Nokuti ndichadururira mvura pamunhu ane nyota,+ uye hova dzinoyerera zvinyoronyoro panzvimbo yakaoma.+ Ndichadururira mudzimu wangu pavana vako,+ nechikomborero changu pavazukuru vako. 4 Ivo vachamera sevari pakati pouswa hwakasvibirira,+ semiti yemishambangwena+ iri pedyo nemigero yemvura. 5 Uyu achati: “Ndiri waJehovha.”+ Uyo achazvishevedza nezita raJakobho,+ uye mumwe achanyora paruoko rwake kuti: “Ndiri waJehovha.” Mumwe achazvitumidza kuti Israeri.’+ 6 “Zvanzi naJehovha, Mambo waIsraeri,+ Mudzikinuri wake,+ Jehovha wemauto, ‘Ndini wokutanga nowokupedzisira,+ kunze kwangu hakuna mumwe Mwari.+ 7 Ndiani aripo akaita seni?+ Ngaashevedzere, kuti azvizivise uye kuti azvitaure kwandiri.+ Kubvira pandakagadza vanhu vekare kare,+ ivo ngavazivise zvinhu zviri kuuya nezvinhu zvava kuda kuuya. 8 Musatya, uye musakatyamadzwa.+ Kubvira panguva iyoyo handina kuita kuti mumwe nomumwe anzwe uye handina kukuzivisai here?+ Imi muri zvapupu zvangu.+ Kune mumwe Mwari ariko kunze kwangu here?+ Aiwa, hakuna rimwe Dombo.+ Hakuna rimwe randinoziva.’” 9 Vagadziri vomufananidzo wakavezwa vose zvavo havasi vechokwadi,+ zvavanoda hazvizobatsiri;+ uye havana chavanoona uye havana chavanoziva+ kufanana nezvapupu zvavo, kuti vanyadziswe.+ 10 Ndiani akaumba mumwe mwari kana kuti akaumba mufananidzowo zvawo wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa?+ Wave usingambobatsiri.+ 11 Tarira! Vamwe vake vose vachanyara,+ uye mhizha dzinobva pavanhu vepanyika. Vose zvavo vachaungana.+ Vachamira. Vachatya. Vachanyara panguva imwe chete.+ 12 Muvezi wesimbi anoshandisa chokuvezesa, ave achiigadzira nemazimbe; uye anoigadzira nenyundo, uye anoramba achiigadzira noruoko rwake rune simba.+ Uyewo, ava nenzara, naizvozvo haana simba. Haana kunwa mvura; naizvozvo anoneta. 13 Muvezi wedanda, atambanudza tambo yokuyeresa; anoritara nechoko tsvuku; anoriveza nembezo; uye anoramba achiritara nechokuenzanisa, uye zvishoma nezvishoma anoriita rakafanana nomufananidzo womunhu,+ sorunako rwevanhu, kuti rigare mumba.+ 14 Kune mumwe ane basa rokutema misidhari; uye anotora muti worumwe rudzi, muti mukuru, uye anoita kuti uve wakasimba nokuda kwake pakati pemiti yomusango.+ Akadyara muti womuraureri, uye mvura inonaya inoramba ichiukudza. 15 Wava chinhu chokuti munhu aite kuti moto urambe uchibvira. Naizvozvo anotora rutivi rwawo kuti adziye. Anobatidza moto obika chingwa. Anogadzirawo mwari waangakotamira.+ Aita kuti uve mufananidzo wakavezwa,+ uye anougwadamira. 16 Anopisa hafu yawo nomoto. Anonyatsogocha nyama yaanodya nehafu yawo, uye anoguta. Anodziyawo moto uye anoti: “Hekani! Ndadziyirwa. Ndaona chiedza chomoto.” 17 Asi wasara wawo anougadzira kuti uve mwari, mufananidzo wake wakavezwa. Anougwadamira uye anokotama onyengetera kwauri oti: “Ndinunurei, nokuti ndimi mwari wangu.”+ 18 Havasati vaziva,+ uyewo havanzwisisi,+ nokuti maziso avo akanamwa kuti varege kuona,+ uye mwoyo yavo kuti varege kuva nenjere.+ 19 Hakuna anoyeuka mumwoyo+ make kana kuti anoziva kana kuti anonzwisisa,+ achiti: “Ndapisa hafu yawo nomoto, uye ndabikawo chingwa nemazimbe awo; ndagocha nyama ndikadya. Zvino ndingagadzira chinhuwo zvacho chinosemesa+ nowasara here? Ndingagwadamira danda romuti rakaoma here?” 20 Ari kudya madota.+ Mwoyo wake wakanyengedzwa wamutsausa.+ Haanunuri mweya wake, uyewo haatauri kuti: “Muruoko rwangu rworudyi hamuna nhema here?”+ 21 “Yeuka zvinhu izvi, haiwa iwe Jakobho,+ newe, haiwa iwe Israeri, nokuti uri mushumiri wangu.+ Ndakakuumba.+ Uri mushumiri wangu. Haiwa iwe Israeri, ini handizokukanganwi.+ 22 Ndichadzima kudarika kwako sokunge negore,+ nezvivi zvako sokunge negore gobvu. Dzoka kwandiri,+ nokuti ndichakudzikinura.+ 23 “Shevedzerai muchifara, imi matenga,+ nokuti Jehovha azviita!+ Shevedzerai mukukunda,+ imi mativi akadzikira kwazvo enyika!+ Farai, imi makomo,+ nokushevedzera kwokufara, iwe sango nemi miti yose iri mariri! Nokuti Jehovha adzikinura Jakobho, uye anoratidza runako rwake pana Israeri.”+ 24 Zvanzi naJehovha, Mudzikinuri wako,+ iye Akakuumba mudumbu: “Ini, Jehovha, ndiri kuita zvinhu zvose, ndiri kutatamura matenga+ ndiri ndoga, ndiri kuwaridza nyika.+ Ndiani aiva neni? 25 Ndiri kuita kuti zviratidzo zvevanotaura zvisina zvazvinobatsira zvirege kubudirira, uye ndini Iye anopengesa vanoshopera;+ Iye anodzorera shure vachenjeri, uye Iye anochinja zivo yavo kuti ive upenzi;+ 26 Iye ari kuita kuti shoko romushumiri wake riitike, uye Iye anoita chose zvakarongwa nenhume dzake;+ Iye ari kuti nezveJerusarema, ‘Richagarwa,’+ uye nezvemaguta aJudha, ‘Achavakwazve,+ uye ndichamutsa nzvimbo dzaro dzakaitwa matongo’;+ 27 Iye ari kuti kumvura yakadzika, ‘Ipwa; ndichaomesa nzizi dzako dzose’;+ 28 Iye ari kuti nezvaKoreshi,+ ‘Ndiye mufudzi wangu, zvose zvandinofarira achazviita chose’;+ kunyange pakutaura kwangu nezveJerusarema kuti, ‘Richavakwazve,’ uye nezvetemberi, ‘Nheyo yako ichavakwa.’”+